छिमेकी बहिनी प्रमिला लाई चिकेको कथा - Naughty Nepali
Home » Nepali Sex Stories » छिमेकी बहिनी प्रमिला लाई चिकेको कथा
छिमेकी बहिनी प्रमिला लाई चिकेको कथा
म १२ मा पढ्छु आजकल भने मेरो घर नजिक कै कि १ केटी १० मा पढ्छिन । म पढाई मा राम्रो नै भएको ले अनि अलि सिनिएर भएको ले त्यो केटी प्रमिला मेरो मा प्राय म्याथ को पढाई गर्न मेरो मा आउछे । हाम्रो घर मा आउन जान कसैलाई रोक तोक छैन तर हामी रातिमा भने एक आर्काको घर जादैनौ । हाम्रो रिलेसन लाई सबैले दाजु बैनिकै रुप मा हेर्ने गरेको ले हामी लाई त्यती कुनै अफ्टेरो पना महसुस भएको छैन ।
मैले पनि प्रमिला लाई बैनी कै रुप मा ब्याबहार गर्ने गर्थे ।त्यस्तै हाम्रो दिन चर्या चली रहेको थियो । तर प्रमिला को कुरा गर्दा उ धेरै नै राम्री अनि सेक्सी छे अनि दुध र चाक पनि ठुला ठुला । तर यो कुरा मैले त्याती ध्यान दिन्न थिए । त्यस्तै प्रमिला मेरो मा पढ्न आएकी थिई मैले १ -२ हिसाब सिकाइ दिए अनि १ प्रश्न सल्भ गर्न उस्लाई लगाए । उ हिसाब गर्न थली भने म त्यही नजिकै बसेर मोबाईल हेर्न थाले । मैले मेरो मोबाईल भनेर लिएको त प्रमिला को मोबाईल समाएछु । पहिला त मैले उस्को मोबाईल राखेर आफ्नो मोबाईल फोन खोज्न लागेको थिए तर फेरी किन हो मैले उस्को मोबाईल फोन नै हेर्न थाले ।
मोबाईल मा मैले सिधै फाईल म्यानेजर बाट उस्को फोटो हरु हेरे । खुब सेक्सी पोज मा फोटो हरु खिचेर राखेकी रहिछे प्रमिला ले । मैले सोची केटी लाई जबानी ले छोइ सकेको रहेछ । अनि फेरी भिडियो मा हेरे अ्म्मा म त छक्क परे उस्ले धेरै नै ब्लु फिल्म हरु पनि राकेकी रह्छे । म त पहिला छक्क्कै परे अनि उस्को मोबाईल उस्ले थाहा नपाउने गरी उस्को नजिकै राखी दिए । उस्ले थाहा पाईन । त्यो दिन देखी मैले प्रमिला लाई चिक्ने प्लान बनौन थाले । त्यो दिन देखी मैले कुरा हरु बिस्तारै माया का कुरा कहाँनी मा बढाउन थाले । बिष्टअरै हाम्रो समय पढाई मा भन्दा बिसेस प्रेम अनि माया का बारेमा हुन थाल्यो । प्रमिला लाई पनि एस्ता कुरा हरु धेरै नै ईन्ट्रेस्टिङ लाग्थ्यो । हामी प्राय अरुको माया प्रेम को बारेमा कुरा गर्थेउ भने म बेला बेला मा सेक्स को कुरा पनि जोड्थे ।
कुरै कुरा मा म सेक्स को मजा को बारेमा पनि जोद्थे भने प्रमिला को सारीर पनि छुने गर्थे । मलाई थाहा थियो प्र्मिला भित्र भित्रै सेक्स चाहाना ले तड्पेकी छे तर पनि मैले कुनै त्यस्तो बाताबरण पाएको थिइन । अस्ती ३-४ दिन पहिला को कुरा हो प्रमिला मेरो घर मा पढन आएकी थिइ । त्यो दिन मलाई सेक्स गर्ने धेरै नै चाहान बढेको थियो । उस्लाई मैले त्यो दिन मेरो रुम मा आउने बित्तिकै च्याप्प दुध मा समाते । पहिला त प्रमिला झास्की अनि म बाट उम्कन खोजी । अनि भनी ” के गरेको दादा ममी किचन मा हुनुहुन्छ फेरी थाहा पाउनु भयो भने हाम्रो के हालत होला ?
मैले मन मनै सोच बनाए । जे भए पनि प्रमिला चिक्न लाई रेडी छे तर डर मानेकी छे हाम्रो यो समाज को । तर मैले कुनै कुरा नसुनी उस्को दुध माड्न थाले अनि भने आउनु हुन्न भर्खर तर्कारी बसाल्ल्दै हुनुहुन्छ । प्रमिला अझै भन्छे ” अनि फेरी आई हाल्नु भो भने नि ? मैले भने आउनु हुन्न क्या । त्यती कै मा मैले एउटा हात प्रमिला को दुध मा कपडा बाहिर बाटै अनि अर्को हात पुतिमा फ्र्क बाहिरा बाटै माड्न थाले । अब प्रमिला पनि कामुक बनेर लामो लामो सास लिन थाली । मैले अब चिक्नु भन्दा पहिला उस्लाई बेड मा सुताउन को लागी के उठाएर बोकेको मात्र थिए उता बाट आमा मलाई बोलाउदै आउनु भयो । आमा ले मलाई देख्नु भयो ।
मैले हत्त न पत्त प्रमिला लाई कुर्सी मा रख्दै भने प्रमि
ला भुई मा लडी त्यसैले उठाएको । आमा ले खास कुनै सन्का नगरि प्रमिला को जिउ तिर चेक गर्दै भन्नु भो खोइ नानी कतै चोट त लागेन ? प्रमिला सम्हालिदै भन्छे छैन अन्टी केहि भाको छैन । खाली त्यो कपडा मा अल्झेर लडेको हो खास केहि भएको छैन । आमा फेरी मलाई सानो काम अर्हाएर किचन तिर लाग्नु भो । मैले प्रमिला को मुख तिर हेरे उ धेरै नै डराउदै म देखी रिसाउन थाली । मैले सम्झाउन खोज्दै थिए तर उ मेरो कोठा बाट आफ्नो किताब कापी बोकेर आफ्नो घर लागी ।
म भने चिक्न नपाको झोक मा बेड्मा नै पल्टे । म त्यो दिन चिक्न लाई अति नै आतुर थिए तर मौका मिलेको थिएन । मेरो पनि ममी दिन भरी नै घरा मा नै हुन्हुन्थ्यो भने प्रमिला का आमा बा पनि घर म नै हुन्थे । मैले प्रमिला लाई फोन गरे प्रमिला लाई म तिम्रो मा आउ है ? उस्ले ठादै अस्विकार गरी अनि आमा बा ले थाहा पाए बर्बाद हुने कुरा गरी । त्यो दिन ४-५ पटक फोन गर्दै मा बित्यो रात पनि बित्यो । रात मा घर बाट कतै आउन जान नपाई ने अनि दिन मा आमा बा ले नछोड्ने भएको ले म सोच मा परेको थिए । त्यो घट्ना को पछिल्लो दिन पनि त्यतिकै बित्यो । उस्माथी झन प्रमिला त्यो दिन पढ्न पनि आईन । मेरो त्यो दिन छट्पटी मा नै बित्यो ।
बेलुका खाना खाएर सुत्ने बेला भए पछी मैले प्रमिला लाई फोन गरे र भने म तिम्रो कोठा मा आउछु तिमी झ्याल खोलेर राख । उस्ले नाइ भन्दाइ रिसाई अनि आमा बा ले थाहा पाए मार्ने छन भन्न थाली । मैले भने म जसरि नि आउछु तिमी झ्याल खोलेर राख । तर उस्ले फोन राखी दिई । मैले पुना फोन लगए तर उस्ले अफ गरिछे । म त्यसै सुत्ने वाला थिईन । म सुस्तरी कसैले थाहा नपाउने गरी मेरो कोठाको झ्याल बाट निक्लेर तल झरे । अनि प्रमिला को घर तिरा लागे । अनि एउटा खाबो गार्हो मा लगाएर म प्रमिला को कोठा को झ्याल छेउ पुगे । झ्याल बन्द थियो मैले खोल्ने कोसिस गरे ।
झ्याल मा चुक्कुल लगाको थिएन खुल्यो । अनि म झ्याल बाट भित्र घुस्न लागेको थिए प्रमिला उठेर आमा बा ले थाहा पाए मार्ने कुरा गर्दै मलाई फर्कन आग्रह गर्न थाली । तर म सुन्दै नसुनी प्रमिला को कोठा मा पसे अनि प्रमिला लाई जोर ले च्याप समाते । चिक्न नपाएको बेला मा मैले खाली प्रमिला लाई मात्र देखेको थे । अरु कुरा मैले सोच्दै सोचिन । म सिधै प्रमिला को दुध समौदै किस गर्न थाले
अनि प्रमिला लाई बेड मा पल्टाय र उस्को म्याक्सी खोली दिए मेरो पनि पेण्टी खोले अब मैले प्रमिला को दुध माद्डै चुस्न थाले लाँडो ठन्केर खपी नसक्नु भई सकेको थियो ती दुधका पोका हरु कसिला अनी पोटिला थिए अनी मेरो यी भोकाएका हात हरु बिस्तारै ती पोटिला पोटिला अनी सार्हो भएका दुधको मुन्टो तिर सल्बलाउदै जान्छ अनी प्रमिला केही बोल्नै सकिन्न प्रमिला मजा लिदै जान्छे अनी आवाज दिन्छ अह… अह.. स्स्स. दुबै हातले प्रमिला को दुधको पोका पालै पालो माड्न थाले । लाई पनि निकै मजा आए जस्तो थियो , “आहहहहहहह ऽऽऽऽऽऽऽ ओहहहहहहहहऽऽऽऽऽऽ उफफफफफफऽऽऽऽऽऽऽ” गर्दै कराउँदै मसार्न थाली. बिस्तारै मैले मेरो मुख सान्ताको दुध निर लगे अनि चुस्न थाले । । दुईटै दुध पालै पालो चुस्न थाले । म जति जोशमा दुध चुस्थे प्रमिला त्यती कराउथी । “आहहहहऽऽऽऽऽऽऽ ओहहहहहहहहऽऽऽऽऽऽ, म पनि कस्सी कस्सी दुधको पोकाहरू चुस्न थाले । १० मिनेट जति चुसे पछि म उठे अनि प्रमिला को पेन्टी खोले र मेरो पनि सबै लुगा खोलि नांगो भए । प्रमिला को दुबै खुट्टा फट्याएर प्रमिला को पूती निर मुख लगे । प्रमिला को पुती पुरै पानीले भिजेको थियो । पुती वरीपरी छ्याप छ्यापी भिजेको थियो । मैले प्रमिला को पुतीको पानी चाट्न थाले । बिस्तारै बिस्तारै जिब्रोले प्रमिला को पुतीको टीसी चलाउन थाले । “आहहहहऽऽऽऽऽऽऽऽ ओहहहहहहहहहहहऽऽऽऽऽऽऽ उफफफफफफऽऽऽऽऽऽऽऽ, य ऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽ, आहहहहऽऽऽऽऽऽ ओहहहहहहऽऽऽऽऽऽऽऽऽ , प्रमिला निकै ईमोशनमा आएर कराउन थाली । म पनि के कम थिए र कहिले जिब्रोले टीसी खेलाउथे , कहिले बिस्तारै टोकिदिन्थे , कहिले दुधको मुण्टा चुसै झै गरी चुसिदिन्थे । मेरा हरेक चुसाई अनि टोकाईमा प्रमिला मदहोश हुन्थिन , म पनि जोशमा सो क्रमलाई निरन्तरता दिदै थिए . म जुरुक्क उठे अनि किस गर्दै मैले मेरो दुई औला प्रमिला को पुतीमा छिराएर खेलाउन थाले. प्रमिला “आहहहहहहह ऽऽऽऽऽऽऽ ओहहहहहहहहऽऽऽऽऽऽ उफफफफफफऽऽऽऽऽऽऽ” गर्दै कराउँदै चाक उफार्न थाली ।
अब प्रमिला ले मेरो लाडो उसको मुख भित्र हालि । मलाई त के भयो भयो , यस्तो आनन्द त जिन्दगीमा महसुस गरेको थिईन । “अब बिस्तारै बिस्तारै चुस्दै लाडोलाई भित्र बाहिर गरन थाली । बरफ खाको झै गरी उनले मेरो लाडो चुस्न थाली । धेरै मजा आईरहेको थियो । प्रमिला निकै मग्न भएर मेरो लाडो मजाले भित्र बाहिर गर्दै चुस्न थाली । कहिले जिब्रोले लाडोको टुप्पो खेलाउथी त कहिले पुरै लाडो मुख भित्र हालेर चुस्थी । करीब करीब १० मिनेट जति चुसेपछि .मैले पनि मेरो लाँडो प्रमिला को पुतीमा छिराए । अनि मेरो लाँडो भित्र बाहिर गर्न थाले । त्यसपछि मैले आफ्नो चिकाईको स्पीड बढाउन थाले । बल गरी गरी धक्का दिन थाले । प्रमिला पनि तल बाट धक्का दिई मलाई सघाउन थाली । मलाई पनि प्रमिला लाई चिक्न असाध्यै मजा आई रहेको थियो । १० मिनेट जति उतानो पारेर चिके पछि , म उठे अनि प्रमिला लाई खाटबाट तल झारे । अनि प्रमिला लाई घोप्टो पार्न लगाए अनि दुबै हात खाटमा टेक्न लाए । प्रमिला लाई घोप्टो पारे अनि मेरो लाँडो फेरि पुतीमा छिराए । बल गरेर एकै चोटि ल्वाम्मै मेरो सबै लाँडो प्रमिला को पुतीमा छिराए । “ऐयाऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽ दुख्यो , अलि बिस्तारै गरन” प्रमिला कराउन थाली । थालीको पीडाको कुनै वास्तानै नगरी म बल गरी गरी चिक्न थाले । शायद अब दुखाई कम भएछ , थाली कराउन छोडी र हल्लाई हल्लाई मलाई चिक्नमा साथ दिई । यसरी चिक्दा झनै मजा आउन थाल्यो । मैले बल गरी गरी चिक्न थाले , प्रमिला पनि मजा लिई लिई सुस्केरा हाल्न थाली “आहहहहऽऽऽऽऽऽ ओहहहहहहऽऽऽऽऽऽ सीसीसीऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽ” १० मिनेट जति यसरी चिके पछि मेरो माल झर्ने सकेत मेरो लाँडोले दियो । “। १०-१५ पटक धक्का दिए पछि , मेरो लाँडोले सबै माल पुती भित्र ओकलीदियो । म केहि बेर हल्लिदै बसे , । त्यस पछि म पुरै थाके अनि प्रमिला को ढाँडमाथी नै घोप्टो परेर सुते । त्यो रात नै मैले कारीब ४ बजे सम्म पाच पटक चिके होला प्रमिला लाई । तसा दिन देखी राती राती प्रमिला र म प्राय सधै चिकामारी खेल्थेउ । हामी ढुक्क ले रात भरी नै चिकामारी खेली रहन्थ्योउ । यसरि मेरो २ बर्ष जती त प्रमिला लाई चिकेर बित्यो ।
chikeko katha, nepali chikeko katha, nepali sex story, nepali sex stories, nepali chikeko story
bahilai chikeko, bahini chikeko katha, chikeko katha, chimeki bahini chikeko katha, nepali chikeko katha, nepali chikeko story, nepali sex stories, nepali sex story, padna vanera aki bahini lai chieko, puti chikeko katha
NEPALI SEX STORY l JABARJASTI SALI KO DUDH MASALNA THALEY